Diyaar ma u tahay inaad kiciso suuqgeynta 'Instagram'? | Martech Zone
Waxaan noqon doonaa kan ugu horreeya ee qira in aanan waqti badan gelin Cinabka, Instagram-ka iyo wadaagista sawirrada warbaahinta bulshada. Waxaan rabaa, laakiin way ka fududdahay in talo lagu bixiyo qoraalka marka loo eego qabashada shaxanka, sameyso naqshad, iyo la wadaago wax macnahiisu yahay oo keliya, laakiin ay helayaan taxaddar dheeri ah. Waxaan dabaysha u qaadanayaa sawiro iyo video eeygayga Gambino halkii… kuwa raacsan ayaa jecel kuwa!
Waxaan rajeynayaa inaan badalo midaas sanadkaan. Waxaan runtii rabaa inaan diirada saaro istiraatiijiyadeena oo aan la jaan qaado dhamaan kanaalkeena warbaahineed si aad uga wanaagsan. Xitaa haddii ay si fudud u isticmaaleyso kamaraddayda si aan sawir uga qaado sawirka muuqda ee qoraallo qoraal ah oo aan la wadaagayo, waxaan hubaa inay ka heli karto wax badan oo ka badan kan 'sawir' ama 'doggie'. Waana mid ku habboon astaanteena iyo waxyaabaha aan ku qabaneyno shaqo aad u wanaagsan. Tilmaamaha ku jira sawir-gacmeedkan ayaa kaa caawin doona!
Macaamiisha maanta waxay ka shaqeeyaan hillaac feejignaan deg deg ah oo mararka qaar xitaa Facebook uusan la socon karin. Tani waa sababta Instagram ay cirka ugu sii shareereyso caan ahaanta. Waxa ay dad badani hore ugu fikireen oo keliya inay yihiin goob wadaag wadaag sawir ah, ayaa hadda noqotay aalad suuqgeyn ah oo warbaahinta bulshada ah oo abuuri karta natiijooyin dhab ah oo dhab ah astaantaada. Ciise Asad
Issa Asad oo la socda faahfaahinta macluumaadka ayaa siinaya ebook buuxa Faa'iidooyinka degdegga ah ee leh Instagram hadda laga soo dejisan karaa bilaash.
Tags: suuqgeynta muuqaalkaInstagramsuuq-geynta suuqaCiise Asadsuuq geyn muuqaal ahWyzowl
Suuqgeynta Dijital ah iyo SEO ee Kooxaha iyo Muusikada
KA BAX (ExE) & Xarunta (@EXITFrontCenter)
Jan 21, 2015 saacadu markay ahayd 2:50 PM
Waad ku mahadsan tahay, Douglas macluumaadka ugu fiican. Aniga, sidoo kale, uma aanan dirin bartayada shirkadda Instagram sida ugu badan ee aan u baahnaa tanina waa inay gacan ka geysataa boodka aniga bilow.